चैते दशैंको दिन जुन झुपडीमा खाने खर्च समेत छैन – Gulmiews
चैते दशैंको दिन जुन झुपडीमा खाने खर्च समेत छैन
२ बैशाख २०७३, बिहीबार १४:०९ Raju Gautam
गुल्मी, बैशाख–२ । छिमेकीको घर–घरमा भुटेको र पोलेको मासु मङमङी बसाईरहेको छ । दाल भात अचार, मासुका दुईतिन परिकार पनि पाकेको छ । अलि माथी मन्दिरमा पुजा पाठ चलेको छ । मेडा ढलेको छन् । बाजा घन्केका छन् । वातवरण निकै रमाईलो छ । तर त्यो गाउँको एक झुपडीमा रुवावासी छ । त्यस झुपडीका लालवालाहरुलाई पकाएर खुवाउने अन्न समेत नहुँदा उनीहरूकी आमा गहभरी आँशु पारेकी छन् ।
केहि बेरपछि जेठानी दिदी पर्नेले अलिकती पकाएको मासु र भात ल्याई दिएर आउछिन र ति लालवालालाई भुलाउने प्रयास गर्छिन । श्रीमान दुवै मृगौला फेल भएर जिवन मरणको दोसाँधमा पुगेर कहराउँदै लडिरहेका छन् । वरीपरी वाँसले वारेको र माथी टिनले छाएको सानो झुपडी छ । त्यस झुपडी रहेको जमिन पनि उनिहरुको आफ्नो होईन, सुकुम्वासी हुन् उनिहरु ।
कच्ची मोटर बाटोकै छेउँमा रहेको उनिहरुको त्यस झुपडीमा पानी आयोकी रह पर्छ , हिल्लाम्मे हुन्छ । चिसो भुँई छ तर सुत्ने पलङ समेत छैन् । राखन–धरान गर्ने वोराहरु हुन् । ति वोराहरु रित्तै छन् । पकाउने, खाने सिल्टीका दुई चारवटा भाँडाहरु देखिन्छन् । जमिन नहुँदा गोठ छैन् जसले गर्दा अर्काको अधिया गाई भैसी समेत पाल्न सकेका छैनन् उनिहरुले ।
उनिहरु हुन् गुल्मीको बलेटक्सार–४ पधेरापारीका विरबहादरु बिश्वकर्माका परिवार । २९ वर्षिय विरबहादुरले हुर्के देखि मजदुरी गरे तर विहान वेलुकाको जोह गर्नु सिवाय अरु केहि गर्न सकेनन् । अनि केहि उपाय लाग्थ्यो कि भनेर ऋण काढेर वैदेशिक रोजगारको मेसो गर्न काठमाण्डौ गए ।
महिनौ सम्म प्रलोभनमा झुलायो दलालले र एक लाख जति खाएर भाग्यो । घर फर्केर फेरी मजदुरी गर्न थाले । त्यो एक लाख ऋणले सतायो र फेरी अर्को साहुको गोडा मोल्न पुगेर डेढ लाख जति ऋण काढेर अर्को दलाल समात्दै २०७१ असौज ३० गते उनि दुवई उडे ।
त्यहाँ पुगे पछि न भने जति पैसा न गत्तिलो काम पाए विरबहादुरले तै पनि त्यो ऋण त तिर्नै प¥यो , उनि जस्तो भए पनि काम गर्न बाध्य भए । तर १६ महिना नवित्दै उनलाई विमार सुरु भयो । काम गर्न नसक्ने भए पछि उनि १६ महिनामा घर फर्किए । विमारले झन गाल्दै गयो । अन्ततः पाल्पा प्रभासमा जचाए पछि वल्ल थाह भयो उनका दुवै मृगौला फेल भएका रहेछन् ।
भएन फसाद । जसले न पहिलाको ऋण तिर्न सकेको छ न त दोश्रो पटकको । विरबहादुर सकी नसकी वोल्दै भन्छन् –‘ के के न गरुँला भनेर विदेश गएँ तर गएर गए जस्तो भएन , म गरिवलाई दलालले फसाए , जम्मा ८० हजार मात्रै ऋण तिरें अरु सवै बाँकी छ । ’ उता उनकी २७ वर्षिया श्रीमति गीता डाको छाड्दै भन्छिन्–‘ लौन सर मेरो श्रीमानलाई बाचाई दिनुस् म अकाला विकला परे ।’ १० वर्षिय जेठा छोरा सुशिलले रुर्दै भने–‘ बाबालाई विमार भए पछि म स्कुलमा फेल भएँ, वावालाई बाचाई दिए हुन्थ्यो नत्र हामी भोकै वस्नु पर्छ । ’
अर्काको मेलापाता गरेर आमाले छोराछोरीको भोक टार्ने र नाङ्गो ढाक्ने काम गर्दै आएकी थिईन तर श्रीमान थातै दिशा पिशाव भए पछि उनलाई कुरेर बस्नु पर्दा घरमा खर्च छैन् । ७ वर्षिय उनका कान्छा छोराले तोते वोलेमा आमा संग सोध्दै थिए –‘ मम्मी हाम्ले आज मासु ल्याउने होईन र ? आमा चाँही आँशु पुछ्दै निजवाफ थिईन् ।
विरबहादुरका बाबु लालबहादुर बिक हुर्के देखि अहिले बुढेसकाल सम्म आरानको धुलो र तातो फलाम संग लड्दै रहेछन् । उनले गला अवरुद्ध पार्दै भने–‘ के गरुँ बाँचुञ्जेल सम्म यहि आरनमा हाड् मासु दले तर यो उमेर सम्म पनि छोराहरुलाई आफ्नो जमिन बनाई दिन सकिन खानैमा ठिक्क भयो । ’उनकी बुढीमाउँ पनि पेटको विमारले थला परेकी रहिछन् । उनलाई देखाउँदै लालबहादुरले भने–‘ के गरुँ मेरो केहि उपाय छैन् छोराको ओखती गरुँ कि यसको ।’
तिन भाई छोराहरु मध्यो विरबहादुर कान्छा रहेछन् र वावु आमा संग छुट्टिएर त्यही वावुको लालपुर्जा नभएको १५ ÷ २० हात जति घडेरमा वाँसले बारेर बसेका रहेछन् । त्यो बनाउँदा किनेको टिनको पैसा समेत नतिरेको उनिहरुले बताए । उनकी श्रीमति गीता भन्छिन –‘ रात दिन खै त्यो टिनको पैसा भनेर साहुले हैरान पारेका छन् । मैले कहाँबाट तिरुँ ? कुन दिन यहि छानो पनि तिनै साहुले निकालेर लैजाने हुन कि भन्ने डर भको’छ । ’
यो समाचारदाताले त्यस घरमा रिर्पोटिङ्ग गर्ने वेला सम्म विरबहादुर बोल्न सम्म सकेका थिए तर त्यहाँबाट फर्केर यो समाचार तयार पार्दै गर्दा वलेटक्सारका पुर्व गाविस उपाध्याक्ष चन्द्र बिश्वकर्माले फोनमा भने –‘ सर हामी त यो चाड पर्वको वेला उनै परिवारको घरको रुवावासीमा छौं, विरबहादुरको वक्य वसेको छ । ’ उनले गरेको फोनको व्यागराउण्डमा सुनिदै थियो–‘ हे मेरो हजुर मलाई छाडेर नजानुस न मैले यि लालावाला कसरी हुर्काउन सक्छु र ?’
केहि वेर त्यो रोदन र चित्कार यो समाचारदाताले सुन्यो र गहभरी आँशु पार्दै गर्दा सदरमुकामको एक आलिशान महलमा चर्को आवाजमा डेक क्यासेट घन्कएको थियो । पारी कोटमा बढाई गरिदै थियो । सडकहरुमा महँङ्गा महङ्गा पहिरनमा माईती मावली जाने महिलाहरुको लर्को थियो । उता ति गीताको विलाखा वन्धन त्यस्तो थियो ।
काठमाण्डौ वनस्थलीको नेशनल केण्डी अस्पतालले ८ ÷ १० लाख लाग्छ भने पछि घर फर्काएर ल्याएका विरबादुरलाई छिमेकीलाई कुर्न लगाई माथी वलेटक्सार बजारमा चन्दा उठाउन हिडेकी गीतालाई कसैले १५ , कसैले २० रुपैयाँ त कसैले २ , ३ सय सम्म चन्दा दिदै थिए । सोही वजारमा रहेको ज्ञवा वलेटक्सार माध्यामिक विद्यालयमा मनाईदै गरेको वर्षिकोत्सवको अवसरमा विभिन्न समाज सेवीहरुले ५ , १० हजार देखि एक डेढ लाख सम्म चन्दा प्रदान गर्ने घोषणा गर्दै थिए तर श्रीमानको जिवन रक्षाको भिक माग्दै त्यसै कार्यक्रम स्थलमा पुगेकी गीतालाई पाँचवटा हजार सहयोगको घोषणा गर्ने कोहि भएनन् । गीताले तल घर पुगेर भनिन् रुदै फर्के सर, १५ , २० रुपैयाँ उठाएर कसरी श्रीमानलाई बचाउन सकुँला र ?
पुँजीपतीहरु सयौं मानिसहरुका विचमा सम्मानित हुन पनि त्यस्ता शैक्षिक र अन्य संस्थामा लाखौं सहयोगका घोषणा गर्छन् हरेक ठाउँमा तर त्यस्ता जिवन रक्षाको भिक माग्नेहरुलाई मन फुकाएर सहयोग गर्न चाहन्न् भन्ने उदाहरण त्यहाँ पनि देख्न सकिन्थ्यो । त्यसै बलेटक्सारका मानिसहरु सरकारी निकायको उच्च ओहदा सम्म छन् । केन्द्रिय तहका नेताहरु प्नि छन् । कतिपयको प्रशस्त जमिन छ । गर्न नसकेर कतै बझाएका छन त कतै अरुलाई अधिया गर्न दिएका छन । तर विरबहादुरको वास वस्ने आफ्नो जमिन समेत छैन् ।
विरबहादुर मात्र होईन त्यस टोलमा रहेका १५÷१६ घर दलित समुदायको अवस्था पनि उस्तै उस्तैछ । बढिमा दुई महिना खान पुग्ने जमिन नभए पछि उनिहरु तिनै पुँजीपतीहरुको खेतीवाली लगाई दिने काममा जान्छन् । गीता भन्छिन् –‘कहिले घाँस पराल गर्दिन जान्छु कहिले पिसकुट गर्दिएर यि छोराहरु पालेकी हुँ, त्यही पनि अहिले त गर्न जान सकेकी छैन् । ’
यस्तो विचल्ली पर्दा कुनै राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ता सहयोग गर्छु भन्न आउँदैनन ? भन्ने प्रश्नमा गीताले भनिन् कोही फर्केर आएका छैनन् । उनको कुरा नसकीदै जम्मा भएका उनका छिमेकी महिलाहरुले एकै स्वरमा भने–‘ किन आउन त नि ,चुनावताका भए आउँदा हुन् क्यारे । ’ उनका ससुरा लालवहादुरका अनुसार धेरै पटकका चुनावताका उनलाई लालपुर्जा दिलाउने आश्वासन धेरै दलले दिएका थिए तर चुनाव सकिए पछि त्यो आश्वासनमै सिमित रह्यो ।
उनका विमारी छोरा विरबहादुर पनि चुनाताका कार्यकर्ता बनेर प्रचार प्रसारमा हिडेको र धेरै आश्वासनहरु पाएको बताउछन् । उनले भने –‘ के के न होला भनेर कट्टर कार्यकर्ता पनि बनियो कुनै दिन तर अहिले आफ्नो यो अवस्था हुँदा हेर्ने कोही छैन् । विरबहादुरको दर्दनाक कथाले यहि भन्छ कि गरिव दलितहरु नेताका भ¥याङ्ग मात्रै हुन अझ भनौ भेंडा वाख्रा जस्तै हुन् । उनिहरुको मुक्ती अव उनिहरु आफै उठे, नजागे सम्भव देखिन्न ।
तस्वीरः वलेटक्सारका उनै विरबहादुर बिश्वकर्माको झुपडी
Comments comments	मिल्दाजुल्दा शिर्षकहरु:	गुल्मीमै बन्न थाल्यो वाईन, जुस र जाम...	१८ आश्विन २०७३, मंगलवार २१:१८	हिजोको ‘कामी टोल’ आजको ‘दामी टोल’...	१७ बैशाख २०७३, शुक्रबार २०:४२	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website ताजा अप्डेट	नेपालका वनमा काम गर्ने श्रमिकलाई कानुनले देख्दैन